About Us - Ningbo Leway Warshadaha Ltd.
Ningbo Leway Warshadaha LTD
Si diiran u soo dhaweynaynaa in aad soo booqato Shirkadda! Waxaan rajaynaynaa in la dhiso iskaashi dhow oo aad la waayo labada!
Ningbo Leway ayaa ku qalabaysan qalab horumarsan wax soo saarka, ay ka mid yihiin in ka badan 50 lathes automatic, mashiinada duro caag ah iyo mashiinada dhinta-shubay biraha. Dhowr mashiinada shirka si toos ah is-horumarsan iyo mashiinada baakada. awoodda wax soo saarka ee Bishii gaari kartaa ilaa 1 milyan qaybood.
Ningbo Leway Warshadaha LTD waa soo saaraha xirfadle in ku takhasustay soo saarista qaybo albaabka Roob ay ku jiraan rollers albaabka qubeyska, gacanta, birihii iyo albaabka kale iyo hardware uu furmo suuqa.
Lorem dolor ipsum amet fadhiisan, elit adipiscing consectetuer, Diam SED
waa soo saaraha xirfadle taht ku takhasustay soo saarista qaybo albaabka Roob ay ku jiraan rollers albaabka qubeyska, qabtaa, ku taagnaa oo albaabka iyo dariishadaha oo kale hardware. Waxay ku taalaa magaalada Ningbo, gobolka Zhejiang, 20 kiiloomitir ka fog dekedda Ningbo iyo drive 2 saacadood garoonka Shanghai. Shirkadda daboolayaa meel ka mid ah 10,000 oo mitir oo laba jibbaaran, lahaanshaha in ka badan 100 shaqaale xirfad bisil, oo uu leeyahay in ka badan 15 sano oo waayo aragnimo ah ee soo saara qaybo albaabka qubeyska.
Shirkadda had iyo jeer u hogaansaneyd mabda'a maamulka, tayada waa nolosha ee shirkadda. Waxaan ku qalabeysan yahay shaqaalaha maamulka iyo imtixaanka ku haboon, qalabaysan qalab qiyaaseed oo ku filan, qalabka baaritaanka. nidaamka kormeer adag ay hubisaa in tayada wax soo saarka sare by stickily baadho oo dhan alaabta ceeriin soo socda si wax soo saarka xilka. In shaybaarka, waxaan samayn kartaa noocyo badan oo kala duwan ee imtixaanka, sida imtixaanka nolosha adeeg, baaritaanka guryaha farsamo, imtixaanka saameyn transverse, imtixaanka load iyo baaritaan lagu buufiyo cusbo. Iyada oo ay gacanta tayo adag ee geedi socodka kasta oo ka mid ah wax soo saarka, tayada alaabooyinka our kiciyey si heer cusub oo lagu shahaado by CE, TUV, si ballaaran loo aqoonsan yahay in industry ee.
Shirkadda ayaa design wax soo saarka iyo horumarinta awoodda cusub oo xoog leh. Waxan u fidinaa adeega OEM, ODM, our R & D kooxda waa qof ku taqasustay isticmaalaya CAD, UG, PRO / E si ay u horumariyaan iyo qorsheeyo waxyaabaha cusub, waxaan sida caadiga ah iskaashi la macaamiisha si ay u baaraan oo design ka badan 100 waxyaabaha cusub sannad kasta.
Custom Zinc Alloy Products, Roob albaabka, Door Hinge, Saraysa rullaluistemadka Door, Ka qabtaa Commercial Glass Door, Roob rullaluistemadka Door,